Archive du 20170720
Kolonely Coutiti Mila ady amin-dRavalomanana indray
Mitombo hatrany ireo irakiraka alefan’ny fitondrana HVM any anaty haino aman-jery hanaratsy an’i Marc Ravalomanana.
Fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety Tokony hijerena lalàna iraisam-pirenena, hoy Rabelaolao
Anisan’ireo zokibe nametraka ny dian-drantsany efa ho 30 taona izao tao anatin’ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety i Jessy Rabelaolao ary efa nisedra antsojay maro, raha ny fitantarany.
Hery Rajaonarimampiana Mpananihany sa mpandainga ?
Nilaza i Hery Rajaoanarimampianina nandritra ny fitokanany ny tetezan’i Kamoro ny alatsinainy 17 jolay teo, fa tsy vaovao marim-pototra ny fametraham-pialan'ny minisitry ny fitantanam-bolam-panjakana,
Ambatondrazaka – Faritra Alaotra Mangoro Mitaona ny olona hanotrona ny tsenabe Tangorona ny HVM
Nanomboka omaly alarobia 19 jolay 2017 tany Ambatondrazaka ny tsenabe Tangorona ho an’ny Faritra Alaotra Mangoro izay haharitra 4 andro ka tsy hifarana raha tsy ny sabotsy 22 jolay 2017.
Boriborintany faha-6 Betsaka ireo ankizy tsy manana kopia
Betsaka ireo ankizy tsy afaka nandia ny varavaran-tsekoly hatramin’izay tao amin’ny Boriborintany fahenina noho ny tsy fananany kopia mari-pahaterahana.
Fokontany Nanisana Iadimbola Hatao rarivato ireo lalan-dratsy
Anisan’ny misedra olana amina resaka fotodrafitrasa ny fokontany Nanisana Iadimbola na dia mbola ao anatin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra aza
ANKADIVATO Trano iray no narodan’ny kaominina
Trano iray tsy ara-dalàna no voatery narodan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra afak’omaly talata, mba ho fanatanterahana ny didim-pitondrana laharana faha-49-CUA/CAB.17.
Rocade Andohatapenaka Vatoaratra 60 no efa lasan’ny mpangalatra
Ripaky ny mpangalatra ireo vatoaratra na “batterie” mampandeha ireo andrin-jiro manazava ny tanàna eny amin’ny Rocade Andohatapenaka.
Mbola ho avotra ve ?
Firy taona izao no nikasana hanatontosana ny fampihavanam-pirenena ary efa im-piry niova ny anaran’ireo rafitra no
Fifaninanana mamorona “robot” tany Etazonia Laharana fahatelo ny Malagasy
Namiratra indray ny tanora Malagasy ary nanandratra avo ny voninahi-pirenena tany ampitan-dranomasina.
Solika Tapitra ny fe-potoana famerana ny vidiny nifanarahana
Tsy manana olana loatra amin’ny fampiasana ny vola vaovao 20.000 ariary ireo mpandraharaha eo anivon’ny famatsiana solika, hoy ny loholona Jean Martin Rakotozafy.
Fitohanan’ny fifamoivoizana Mila vahaolana maty paika
Mampiteny ny moana ny fitohanan’ny fifamoivoizana eto Antananarivo. Tsy andavanandro, tsy andro tsena fa saika isan’andro mihitsy. T